မြန်မာနိုင်ငံတွင် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သော Suzuki ကားသစ် Ertiga ... | CarsDB
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သော Suzuki ကားသစ် Ertiga 2015 ကို ဝယ်ယူနိုင်ပြီ
Suzuki (Myanmar) Motor Co.,Ltd. မှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ Suzuki Japan စက်ရုံတွင် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ် ထားသော Suzuki Brand New ကားသစ် Ertiga 2015 ကို စတင်ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်.။
Suzuki Ertiga ကားသစ်သည် အင်ဂျင်ပါဝါ 1400 cc ရှိသော MPV ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဓါတ်ဆီကား အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်.။ အရောင်အားဖြင့် မီးခိုးရောင်၊ အဖြူရောင် နှင့် သနပ်ခါးရောင် တို့ဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီး Auto Gear, Steering Volume Control နှင့်3year (သို့) 100,000 ကီလိုမီတာ limited warranty ပါဝင်ပါသည်.။ Suzuki Ertiga 2015 ၏ အားသာချက်များမှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ Suzuki Japan စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့် Spare Parts များ လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ခြင်း နှင့် ဘယ်မောင်း (၇) ယောက်စီး ဖြစ်ပြီး Round Aircorn ပါဝင်သော ကြောင့် စီးနင်းလိုက်ပါသူများအတွက် သက်တောင့်သက်သာ ရှိစေပါသည်။ နောက်ဆုံးခုံတန်းအား လိုက်ပါ စီးနိုင်သလို ၊ ခရီးဝေးသွားမည်ဆိုပါ က ခုံတန်းအား ခေါက်သိမ်းစနစ်ဖြင့် ပစ္စည်းများကိုလည်း တစ်ပါတည်း သယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဈေးနှုန်းမှာ $17900 ဖြစ်ပြီး Suzuki Authorized Dealer ဖြစ်သော Myo Motor (Car Sale Center) တွင် မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ်များ လာရောက် ဆက်သွယ်၊ စမ်းသပ်မောင်းနှင် ၀ယ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါး အပ်ပါသည်။ စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုကို 30.7.2015 ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်တွင်လည်းကောင်း၊ 1.8.2015 ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ Myo Motor Car Showroom တွင်လည်းကောင်း ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်.။ ကြိုတင် (pre order) မှာယူ ၀ယ်ယူ သူမိတ်ဆွေများကို အထူး လက်ဆောင်များလည်း ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ရန်အတွက် Booking ပြုလုပ်နိုင်မည့် ဖုန်းနံပါတ်များမှာ 09 510 1944, 09 78510 1944, 09 97 555 1944, 01 400123, 01 400 399, 01 55 66 85 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.။ Myo Motor Car Sale Center ၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာမှာ အမှတ် (၁၉၂) အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်ပါသည်။
Suzuki (Myanmar) Motor Co.,Ltd. မှ မွနျမာနိုငျငံရှိ Suzuki Japan စကျရုံတှငျ တပျဆငျထုတျလုပျ ထားသော Suzuki Brand New ကားသဈ Ertiga 2015 ကို စတငျဝယျယူနိုငျပွီဖွဈကွောငျး သတငျးရရှိသညျ.။
Suzuki Ertiga ကားသဈသညျ အငျဂငျြပါဝါ 1400 cc ရှိသော MPV ကားအမြိုးအစားဖွဈပွီး ဓါတျဆီကား အမြိုးအစားဖွဈပါသညျ.။ အရောငျအားဖွငျ့ မီးခိုးရောငျ၊ အဖွူရောငျ နှငျ့ သနပျခါးရောငျ တို့ဖွငျ့ ရရှိနိုငျပွီး Auto Gear, Steering Volume Control နှငျ့3year (သို့) 100,000 ကီလိုမီတာ limited warranty ပါဝငျပါသညျ.။ Suzuki Ertiga 2015 ၏ အားသာခကျြမြားမှာ မွနျမာနိုငျငံရှိ Suzuki Japan စကျရုံမှ ထုတျလုပျခွငျးကွောငျ့ Spare Parts မြား လိုအပျလြှငျ လိုအပျသလို အလှယျတကူ ဝယျယူရရှိနိုငျခွငျး နှငျ့ ဘယျမောငျး (၇) ယောကျစီး ဖွဈပွီး Round Aircorn ပါဝငျသော ကွောငျ့ စီးနငျးလိုကျပါသူမြားအတှကျ သကျတောငျ့သကျသာ ရှိစပေါသညျ။ နောကျဆုံးခုံတနျးအား လိုကျပါ စီးနိုငျသလို ၊ ခရီးဝေးသှားမညျဆိုပါ က ခုံတနျးအား ခေါကျသိမျးစနဈဖွငျ့ ပစ်စညျးမြားကိုလညျး တဈပါတညျး သယျယူနိုငျမညျဖွဈပါသညျ။
စြေးနှုနျးမှာ $17900 ဖွဈပွီး Suzuki Authorized Dealer ဖွဈသော Myo Motor (Car Sale Center) တှငျ မိတျဟောငျး မိတျသဈမြား လာရောကျ ဆကျသှယျ၊ စမျးသပျမောငျးနှငျ ဝယျယူနိုငျပွီ ဖွဈကွောငျး သတငျးကောငျးပါး အပျပါသညျ။ စမျးသပျမောငျးနှငျမှုကို 30.7.2015 ရကျနတှေ့ငျ နပွေညျတျောတှငျလညျးကောငျး၊ 1.8.2015 ရကျနတှေ့ငျ ရနျကုနျ၊ အရှမွေ့ငျးပွိုငျကှငျးလမျး၊ Myo Motor Car Showroom တှငျလညျးကောငျး ပွုလုပျနိုငျမှာဖွဈပါသညျ.။ ကွိုတငျ (pre order) မှာယူ ဝယျယူ သူမိတျဆှမြေားကို အထူး လကျဆောငျမြားလညျး ပေးအပျသှားမညျ ဖွဈပါသညျ။ စမျးသပျမောငျးနှငျရနျအတှကျ Booking ပွုလုပျနိုငျမညျ့ ဖုနျးနံပါတျမြားမှာ 09 510 1944, 09 78510 1944, 09 97 555 1944, 01 400123, 01 400 399, 01 55 66 85 သို့ ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ.။ Myo Motor Car Sale Center ၏ ဆကျသှယျရနျလိပျစာမှာ အမှတျ (၁၉၂) အရှမွေ့ငျးပွိုငျကှငျးလမျး၊ တာမှမွေို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့ ဖွဈပါသညျ။
Posted at: 29-07-2015 13:31 PM